Maalinta: 23-ka July, 2018
Dhamaan garoomada 2007-2017 sanadka oo dhan in waqtiga u dhexeeya imaanshaha sida fulinta kun 26 555 498 million tons oo xamuul ee Turkey (Alaabtoodii, xamuulka iyo mail) dhaqaaqay. Alaabtoodii qaadeen waqtiga sameeyey oo dhan garoomada diyaaradaha ee dalka Turkiga, xamuulka [More ...]
Qaabka ugu weyn uguna awoodda badan ee Bursa waa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa. Marka tan la eego, yük TCDD tareenka xamuulka qaada ee ka socda Bursareenka tareenka illaa aagga warshadaha oo ay la socdaan dadaallada Bursa OIZ iyo Nilüfer OIZ. [More ...]
Shilalka tareenka ee ka socda Pamukova ilaa Çorlu Madasha ayaa la qabtay: Haydarpaşa iyo Kadıköy City Solidarity ayaa abaabulay kulan, iyagoo ku nuuxnuuxsaday in amniga wadooyinka tareenka la iska indhatirey. Meel fadeexad ah ayaa sidoo kale lagu muujiyay kulanka: Dhismaha wadooyinka [More ...]
Mashruuca Tiknoolajiyada Tigreega ee Istanbul
Shirkada Çekmeköy Cemal Güngör Park waxaa lagu furay maadooyin la mid ah fikirka “Nation Garden olan, mashruuca Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. Degmada Çekmeköy waxay ku taalaa jardiinooyinka waaween ee degmada oo leh kun mitir murabac [More ...]
Forest Kibari ayaa yimid Konya
Iyada oo si xawli ah u kordhaysa tirada dadka, wasakhda ay sababtay gacanta aadanaha; waxyeelada deegaanka iyo bulshada ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa. Kordhinta wasakhowga deegaanka sanadihii la soo dhaafay, ayaa ku faafay gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Sarkaalka Gaadiidka-Sen Ankara Laanta 3 No. 2. Atilla Demirtunç ayaa mar labaad loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha Golaha guud ee caadiga ah. Sarkaalka Gaadiidka-Sen Ankara 3 Laanta 2. Atilla Demirtunç ayaa mar labaad loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha Golaha guud ee caadiga ah. TCDD [More ...]
Waxaan ka filaneynaa taageero ka timid TÜDEMSAŞ, Wasiir Ku-xigeenka
Abdullah Peker, Gudoomiyaha Ururka Xuquuqda Shaqaalaha Gaadiidka, ayaa sheegay in soo bixitaanka seddex wasiir ku xigeen oo ka socda Sivas lagu soo dhoweeyay magaalada wuxuuna cadeeyay inay filayaan xiisaha iyo muhiimada TUDEMSAS. Gawaarida Shaqaalaha Gaadiidka Guud [More ...]
Gaadiidka Gawaarida ee Ankara oo ka gudubtay Metropolitan
Ardayda Jaamacadda Farsamada ee Istanbul (ITU), oo ah caasimada ayaa laga soo saaray "Carwo Caan ah" oo ay la socoto Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Waxay booqdeen Mustafa Tuna. Madaxweynaha Jaamacadda Farsamada ee Istanbul Serap Çatalpınar iyo maamulka [More ...]
Salihli xayiraad la leh kobcinta bridge
Mashruuca Jid-goosadka ee Köprülü, oo isku xira degmada Salihli iyo Xarunta Wershadaha ee Wadada onzmir-Ankara ee ku taal Degmadda Manisa oo ay ka biloowday shaqada halka loo yaqaan isgoyska dhimashada, ayaa si xawli ah u socota. Sare ee isgoyska mashruuca [More ...]
Kormeerka Dadweynaha ee Gaadiidka Dadweynaha ee Shanleyurfa
gobolka kulul Turkey ee Sanliurfa, kooxaha Metropolitan Police degmada bilaabay in ay gacanta ku cimilada safarka ku jira baabuurta la dharka dadka rayidka ah. Caafimaadka muwaadiniinta safka hore ee dawlada hoose ee magaalada, ma ogola in la isticmaalo baabuurta qaboojiyaha leh. Turkiga [More ...]
RayHaber 23.07.2018 Warbixinta Shirka
Cusboonaysiinta ee Seminaarrada Dayactirka Dayactirka Sivas iyo Nidaamka Kuleylka Goobta Shaqada Ku xiran
Gaadiidka Isku Jiidka O-3 Jid-gooyo Baagilar Junction
Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay ka shaqeyneysaa isgoys kale oo muhiim ah si loo yareeyo qulqulka taraafikada. O-3 Yanyol iyo U-leexinta (dhererka mitirka 400) ee degmada Bağcılar waa la soo gabagabeeyey, qulqulka taraafikada ayaa is dejin doona dhismahana wuu sii soconayaa [More ...]